Global Voices teny Malagasy » Nahoana Ny Efitra Fandroan’ny Japoney No Tsara Indrindra, Sy Lahatsary Hafa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Oktobra 2016 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora
Pikantsary tamin'ny fantsona Youtube Fiainana Any Amin'ny Misy Ahy
Efa mba nanontany ve ianao hoe ahoana no fomba iainan'ireo olona hafa ny fiainan'izy ireo andavanandro manerana izao tontolo izao? Tahaka ny ahoana ny trano fonenana ? Inona no hohanin'ny olona amin'ny sakafo maraina , sakafo atoandro sy ny sakafo hariva ?
Raha manan-kambara ianao, misy ny fantsona YouTube ho anao. Ny Fiainana Any Amin'ny Misy Ahy (Life Where I'm From)  dia mampiseho bilaogin-dahatsary am-polony ambony kalitao momba ny fiainana ao Japana, ary indraindray avy amin'ny firenen-kafa.
Matetika i Aiko, tovovavv monina miaraka amin'ny fianakaviany ao Japana no nampiantrano ny bilaogin-dahatsary. Maka ny sary, manitsy sy mamoaka ny lahatsary i Greg, rainy, Kanadianina nifindra any Tokyo.
Efa olona an-tapitrisany manerantany no nijery ny bilaogin-dahatsary, anisan'izany ity manaraka ity izay manazava ny “antony mahatonga ny efitra fandroan'ny Japoney ho tsara indrindra”
Misy ireo lahatsary mamaritra fotsiny ny endrim-piainana rehetra ao Japana amin'ny fomba fijerin'ny ankizy, anisan'izany ny hoe tahaka ny ahoana ny fananana toeram-pisakafoanana ramen , na ahoana ny fankalazana Halloween ao Japana .
Manana tranonkala miaraka aminy ny fantsona YouTube, Life Where I'm From . Araka ny filazan'i Greg :
Nanatontosa lahatsary vitsivitsy mikasika ny hoe tahaka ny ahoana fiainanay ao Japana izahay, saingy fanirianay hatrany ny hahafantatra koa hoe tahaka ny ahoana ny fiainanao any amin'ny misy anao.
Ny tena tanjon'ny tetikasa dia ny ahitana ireo ankizy avy amin'izao tontolo izao maneho ny fiainana any amin'ny misy azy ireo. Raha manam-bintana izahay manana anao hizara ny tantaranao, dia fanirianay ny hampiseho ny sasany amin'izany ao amin'ny lahatsarinay.
Mampiantrano ireo lahatsary ao amin'ny bilaogy iray koa ny tranonkala, izay lasa sehatry ny adihevitra mafana momba ny andavanandrom-piainana saika avy amin'izao tontolo izao.
Mandrisika ny mpijery  mba hanampy hamaritra ny endriky ny lahatsary manaraka ihany koa ny ekipa ao amin'ny Life Where I'm From.
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Life Where I'm From 
Manana bilaogin-dahatsary malaza iray hafa ihany koa, antsoina hoe Life Where I'm From X  i Greg. Araka ny filazan'i Greg, ahitana ny “fomba fijerin'olon-dehibe ny fiainana ao Japana” ny bilaogin-dahatsary.
Ao anatin'ity bilaogin-dahatsary ity, miresaka momba ireo olana toy ny tsy manan-kialofana ao Japana , sy izany hoe manana fahasembanana mitsidika an'i Japana izany i Greg.
Ankoatra ny fantsona YouTube sy ny tranonkala, afaka manaraka ny ekipa Life Where I'm From ao amin'ny Twitter @lifewhereimfrom ihany koa ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/11/89844/
 Tahaka ny ahoana ny trano fonenana: https://www.youtube.com/watch?v=P_-QJO802Yc
 sakafo maraina: https://www.youtube.com/watch?v=zRIDcCLxdRI
 sakafo hariva: https://www.youtube.com/watch?v=ATzWZoEFgcY&list=PLwBDd34gIIWmGs5YXO5_dOBTvwUvSIWGg&index=7
 Fiainana Any Amin'ny Misy Ahy (Life Where I'm From): https://www.youtube.com/channel/UCqwxJts-6yF33rupyF_DCsA/videos
 tahaka ny ahoana ny fananana toeram-pisakafoanana ramen: https://www.youtube.com/watch?v=gmIwxqdwgrI
 ahoana ny fankalazana Halloween ao Japana: https://www.youtube.com/watch?v=mC5RRRq4-rE
 Araka ny filazan'i Greg: https://www.youtube.com/channel/UCqwxJts-6yF33rupyF_DCsA/about
 bilaogy : http://www.lifewhereimfrom.com/2016/09/
 Mandrisika ny mpijery: http://www.lifewhereimfrom.com/community/
 tsy manan-kialofana ao Japana: https://www.youtube.com/watch?v=Q8vhdQOH-Tk
 @lifewhereimfrom : https://twitter.com/lifewhereimfrom